Datalegreya waa font cusub oo bilaash ah oo muujineysa garaafyada qiyamka | Abuurista khadka tooska ah
Qaabka qoraalka ayaa adeegsanaya lahjadaha qaarkood si loo soo jiito dareenka oo kala saar qoraalka meel kasta oo lagu soo bandhigo ama lagu soo bandhigo. Sidoo kale way nagu adag tahay inaan ka fikirno nooc cusub oo xarfo ah oo bixiya weecasho waxa loo dejiyey, sidaa darteed nooc-kan cusub wuxuu leeyahay sabab badan oo uu noqon karo.
Datalagreya waa a font cusub oo bilaash ah taasi waxay ku kordhin doontaa macno dheeri ah qoraaladaada. Waa fure OpenType ah oo kuu ogolaanaya inaad kudarto xoqadaha xogta adigoo u maraya qoraalka. Ujeedada laga leeyahay ilahaani waa shaashado yaryar, sida dharka la gashan karo ama aaladaha ku xiran.
Aynu dhahno taas shaashadda yar ee shaashadda meesha ay tahay inaad ku qabato muuji jaantusyada, warbixinnada sanadlaha ah iyo xogta saadaasha hawada, Datalagreya waa nooca saxda ah ee loo yaqaan 'typeface pipe' oo lagu mideeyo si aad u qurux badan dhammaan garaafyadaas iyo khadadka kor u kaca kuna dhaca indhahayaga hortooda.
Waxaa loogu talagalay Alegreya Sans SC Thin, a font font loogu talagalay waxaa qoray Juan Pablo Del Perla, wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad abuurto saameyn casri ah oo casri ah adiga oo aan u baahnayn inaad ku darto barnaamij dheeri ah.
Waxay soo bandhigi doontaa xogta sida xariiq fidsan, ama waad awoodi kartaa ku buuxi qaab dhibic fudud ama gradients. Haddii aad horeyba u rabtay inaad ku darto macno dheeraad ah xogta aad soo bandhigtay, waxaad isticmaali kartaa noocyo kale oo garaafyo aad u adag ah, sida aad ugu dari karto halyeeyo ama macluumaad kale labadaba dhidibka X iyo Y ee garaaf yar.
Sirta qoraalkani waa in markasta oo xaraf kasta oo qoraalka ka dib aad rabto inaad ku isticmaasho Datalegreya, waa inaad gal dabeecad gaar ah oo ay ku xigto lambar, si markaa isha si toos ah awood ugu leh inay ku abuurto curve xog leh tirooyinkaas. Waxay noqon kartaa waxoogaa qiimo yar marka hore, laakiin waxay leedahay awood badan.
Waad soo dejisan kartaa halkan ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Datalegreya waa font bilaash ah oo cabsi leh khadad jaantus ah
Fikrado la'aan tattoo-kaaga xiga? Klimt waa jawaabta
Ku soo qaado walxaha nolosha dhabta ah iskankan 3D-ga ah ee hal-abuurka ah